Akafuni ukugoba uphondo uJudy Sexwale | isiZulu
Akafuni ukugoba uphondo uJudy Sexwale
Unkosikazi kangqongqoshe ufuna izigidi behlukanisa
Ufuna ukuhlawulwa obencisha umyeni ucansi
Imibono ngobencintsha umyeni wakhe ucansi
Johannesburg - UJudy Sexwale akakucabangi nakukucabanga ukuhoxisa izinsolo ezithi umyeni wakhe uTokyo Sexwale, ubemgibela ngezibhakela futhi emhlukumeza nasemoyeni, waphazamiseka nasemqondweni.
Ekhulunyelwa ngummeli wake, uveze ukuthi waqala ukuthanda lo Ngqongqoshe woMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu, ngesikhathi esasejele eRobben Island.
Imininingwane ngokuxabana kwalaba bashadikazi yabhalwa ephephandabeni langoLwesihlanu iThe Star.
Ummeli kaJudy uBeverly Clark, uthi bamile esitatimendeni esifungelwe.
“Unkosikazi Sexwale akafuni ukuqophisana ngamazwi esidlangalaleni nomyeni wakhe noma nommeli womyeni wakhe. Akakholelwa ekuthini ebekwenzeka emshadweni wakhe, kumele kube yizindaba zomphakathi. Unamathemba okuthi kuzoboniswanwa ngalolu daba bese kuqedwa ngalo."
Encwadini ehanjiswe enkantolo, uJudy ukhale ngokuthi umyeni wakhe wazama ukumfihlela ngomcebo wakhe, kusukela bashada ngo-1993.
Uthi ufuna ukunxeshezelwa ngomuzi ka-R70 million, ifenisha ka-R3 million, kube yimoto engekho ngaphansi kuka-R1 miillion njalo ngemuva kweminyaka emihlanu, kube isamba sika-R150 000, sokuzibheka njalo ngenyanga kanjalo nengxenye yomcebo wakhe.